विश्वकप फुटबल छनोटमा नेपाल जोर्डनसँग पराजित , ४० डिग्री सेल्सीयस भन्दा बढी तापक्रममा भएको थियो खेल ! - Dainik Online Dainik Online
विश्वकप फुटबल छनोटमा नेपाल जोर्डनसँग पराजित , ४० डिग्री सेल्सीयस भन्दा बढी तापक्रममा भएको थियो खेल !
कुवेत सिटी रङ्गशालामा जोर्डनले खेलको १६औँ मिनेटमा गोलको अवसर पाएको थियो । यस्तै खेलको २३औँ मिनेटमा रोहित चन्दले डी बक्समा फल गरेपछि जोर्डनले पेनाल्टी पाएको थियो । जोर्डनका बाहा फैजल सेइफले पेनाल्टीमार्फत गोल गर्नुभयो । नेपाली टिममा युवा खेलाडीको बाहुल्य रहेको थियो ।
इराक र चाइनिज ताइपेईविरुद्धको खेलमा बेञ्चमै रहेनुभएका विकास खवास जोर्डनविरुद्धको शुरुवाती ११ खेलाडीमै पर्नुभएको थियो । खेलको २९औँ मिनेटमा घाइते भएपछि उहाँ मैदानबाट बाहिरिनुभयो । उहाँको स्थानमा सुनिल बल मैदान प्रवेश गर्नुभयो ।
कुवेतमा खेल सञ्चालन हुँदा अधिकतम तापक्रम ४० डिग्री सेल्सीयसभन्दा बढी रहेको थियो । दोस्रो हाफमा जोर्डनले खेलको ४८औँ मिनेटमा गोल गर्दै अग्रता दोब्बर बनायो । खेलको ५८औँ मिनेटमा मनीष डाँगीले मौका पाए पनि गोल गर्न सक्नुभएन । खेलको ६७औँ मिनेटमा अल अरबीले गोल गर्दै नेपाललाई ३–० ले पछि पार्नुभयो । नेपालले अब बिहीबार अस्ट्रेलियासँग खेल्नेछ ।
फुटबल टोलीका कप्तान किरण चेम्जुङ भन्छन्-अस्ट्रेलियासँग मरेर खेल्यौं (अन्तरवार्ता)
युरोकप २०२० : इंग्ल्यान्डको विजयी सुरुवात
एक दिवसीय अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेटमा खेलाडीको भत्ता १० हजार